Adihevitra momba ny ‘covid organics’ sy ny fikaroham-panafana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mitohy hatrany ny fampitam-baovao
iraisan’ny haino aman-jery rehetra eto Madagasikara,
radio sy televiziona,
momba ny ady amin’ny ‘coronavirus’
noho ny ‘réquisition’ ampiharina amin’izy ireny.
Lohalaharana amin’izany ny fampitam-baovaom-panjakana TVM sy RNM.
Tamin’izao herinandro faharoa amin’ny 15 andro amin’ny fanitarana ny hamehana ara-pahasalamana izao, dia nisongadina ny fanehoan-kevitra samihafa momba ny fisotroana ny ‘tambavy CVO/covid-organics’. Taorian’ny tsikera isan-karazany amin’ny fanerena ny fisotroana azy, nanomboka tamin’ny mpianatra manala fanadinana sy ny akon’ny fisotroan’ny olona azy niely tamin’ny fampitam-baovao samihafa sy tambajotra sosialy, dia niova ilay ‘tsy maintsy misotro’ nambaran’ny filohan’ny Repoblika tany am-boalohany, ka lasa ‘tsy an-tery’ indray ny fisotroana azy. Nanafintohina olona maro moa ny tranga tao amin’ny lycée moderne Ampefiloha (LMA) nisian’izany fanerena izany sy nampodiana ireo tsy nanaiky hisotro, ary fitakiana taratasy avy amin’ny dokotera, araka ny hita tamin’ny fahitalavitra samihafa. Ny an’ny filohan’ny Repoblika moa dia iny efa nambarany ho ren-tany ho ren-danitra iny fa « rahefa tsy hisotro ilay fanafody ‘covid-organics’ ny zanakareo dia aza halefa any am-pianarana ». Anisan’ny naneho hevitra nilaza ny tsy tokony hanerena ny fisotroana ity tambavy ity ny FFKM tamin’ny alalan’ny filoha ankehitriny ny Pasitora Rakotonirina David.
Eo anivon’ny Fiangonana, misy ny nisafidy ny hanokatra ny Fiangonana toy ny FJKM fa manaraka kosa ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana ary naka alalana tamin’ny tompon’andraikitra mahefa amin’izany, teo anivon’ny prefektiora ho an’Antananarivo Renivohitra. Ho an’ny EKAR dia manohy ny fanarahana amin’ny haino aman-jery, radio sy televiziona no natao, araka ny hafatra nampitain’ny Kardinaly Desiré Tsarahazana sy ny Arsevekan’Antananarivo, Mgr Odon Marie Arsene Razanakolona. Tamin’ny alahady 26 aprily dia niainga hatrany tao amin’ny katedraly Andohalo ny lamesa tsy natrehan’ny mpino fa nampitaina tamin’ny radio sy televiziona IBC, notarihin’i Mgr Pascal Andriantsoavina. Nanao ny azy toy ny mahazatra isan’andro ny Radio Don Bosco (RDB) sy ny radion’ny diosezy.
Manomana ny fialana miandalana amin’ny fihibohana na ‘déconfinement’ ny firenena maro amin’iny volana mey iny, 3 na 11 mey, arakaraka ny fiovan’ny antontanisa amin’ny trangan’aretina sy ny isan’ny maty ary ny sitrana. I Madagasikara, dia efa nanomboka izany hatramin’iny herinandro iny fa arahana fepetra fisakanana ny tsimokaretina tsy hihanaka izany. Nampanaovina asa famafan-dalana izay mandeha an’arabe tratra tsy manao aro vava sy orona hatramin’ny 27 aprily 2020. Fantatra amin’ny alalan’ny haino aman-jery samihafa eran-tany, radio sy fahitalavitra, fa mitohy ny fikarohan’ny manam-pahaizana ny fanafody iadiana amin’ity ‘covid-19’ ity. Nampalaza an’i Madagasikara ny filazan’ny filoha Rajoelina ny fahitana ny ‘covid-organics’ manasitrana ny aretina tamin’ny 19 aprily, ka misy taorian’izany ireo filoham-pirenena liana sy nitafa taminy momba ity tambavy ity toa ny an’i Congo (RDC) sy i Sénégal. Nampitaina tamin’ny TVM sy fahitalavitra maro izany. Momba ilay tambavy/fanafody ‘covid-organics’ ihany koa dia miteraka fisalasalana ho an’ny olona ny momba azy satria miovaova lava ny teny ampitain’ireo tompon’andraikitra, indrindra moa fa samy manana ny heviny ny dokotera, ao ny mankasitraka na dia misalasala aza, ao ny tsy mankasitraka mihitsy, ary ao ny tsy milaza ny heviny.
Maneran-tany dia maherin’ny 3 tapitrisa no tratry ny tsimokaretina ‘covid-19’ tamin’ny 28 avrily (maherin’ny 2,5 tapitrisa tamin’ny 21 aprily) ; maherin’ny 210 000 kosa ireo namoy ny ainy (178 000 tamin’ny 21 aprily). Anisan’ny be maty indrindra hatrany raha ny isa tamin’ny 28 aprily i Etazonia (maherin’ny 56 000), Italie (maherin’ny 27 000), Espagne (maherin’ny 23 000), France (maherin’ny 23 000) ary Grande Bretagne (maherin’ny 21 000). Mifandimby manazava sy manentana ny fepetra arahina ho fisorohana ny aretina ireo tompon’andraikitry ny fahasalamana, dokotera sy profesora, miainga eny amin’ny CCO (Centre de commandement opérationnel covid-19) Ivato, hampitana ny vaovao ofisialy momba ny ady amin’ity covid-19 ity ary lohalaharana amin’izany hatrany ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle mpitondra teny ofisialy. Manantitrantitra hatrany izy ny hanarahana ny fepetra fisorohana toy ny fitandrovana ny fahadiovana sy ny fitondrana ‘masque’ na aro vava sy orona. Ho an’i Madagasikara, dia 128 no nambara fa tratry ny tsimokaretina ary 90 no sitrana tamin’ny 29 aprily raha 121 herinandro talohan’izay ary 52 no sitrana. Miisa 3107 ireo fitiliana natao hatramin’ny 29 aprily, ary tsy misy ny aina nafoy.